ओरालो लागेको मृग अर्थात् नेपाल
उत्तमताको परिचय खोज्दै अन्जली तिमल्सिना
मुलुकभित्र 'क्रान्ति, आन्दोलन, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, जनवाद, चमत्कार, नागरिक सर्वोच्चता’ जस्ता असंख्य शव्दहरूमा राजनीतिक बहस भैरहँदा, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम भन्ने संस्थाले हिजो जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धात्मक विकास स्तरको सूचीमा नेपाल १३३ देशमध्ये १२५ औँ स्थानमा गोलचक्कर खाँदै गरेको समाचार आएको छ ।
सत्य के हो भने , हामीले जति ठूला कुरा गरेर चिच्चाउँदै कोहोलो हाले पनि, हामी एशियाकै सबैभन्दा हरितन्नम पछौटे मुलुक रहेको तथ्यांकहरूले हल्ला गर्दै बताइरहेका छन् । हाम्रा साथमा वा हाम्रा पछाडि अब केवल केही अफ्रिकी मुलुकहरू - बुरूण्डी र क्रमशः घट्दोक्रममा जिम्बाबे, चाड, माली, मोजाम्बिक, बुर्किनाफासो, र मौरिटानिया जस्ता प्राकृतिक कोपभाजनका शिकार बनेका सब‍-सहारा क्षेत्रका मध्य अफ्रिकी देशहरू मात्र बाँकि रहेका छन् । यो सर्वेक्षणले प्रष्टाएको सत्य के हो भने, हामीले जति महान राजनीतिक चेतना र उपलव्धिका कुरा गरे पनि, हाम्रो भाग्य र हैसियतलाई बिगार्ने कामबाहेक अहिलेसम्म कामलाग्दो केही गरिरहेका रहेनछौँ । अहिलेसम्मका हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका उपलव्धिहरूको सारांश यही रहेछ कि हामी मानविय विकासको सूचकांकमा एशियाको सबैभन्दा कमजोर वा तल्लो मुलुक रहेछौँ । भन्न र स्विकार्न गाह्रो लाग्ने यो तीतो सत्य ओठ चेप्राएर निल्नु नै हाम्रो नियति हो भन्नुमा अन्यथा रहेन ।
पूरा रिपोर्ट पढ्न यो लिंकमा जानुहोला: http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
नेपालको इतिहासमा सदैव देखिएको सत्य कुरा के हो भने, हामी राजनीतिको पछाडि सधै दगुरिरह्यौँ । राजनीतिको भीड बनाएर सदैव जिन्दावाद मूर्दावादका लयमा हिंसा, आतंक, भ्रष्टाचारको इन्धनले सडक तताइरहँदा, टायर बालिरहँदा र अरूकै थाप्लोमा आरोप थोपरिरहँदा हामी आफ्नै कर्तव्यबाट सँधै टाढिइरह्यौँ । कर्तव्य, प्रवृत्ति र पद्धतिलाई सुधार्न व्यक्तिले पनि गर्नु पर्ने वा गर्न सक्ने शुरूवातलाई बिर्सेर , आफैलाई राजनीतिक चेतनाको महानायक ठान्ने भ्रममा हामीले संसार कता जाँदैछ र हामी कता रुमल्लिएका छौँ भन्ने कुरालाई कहिल्यै हेक्का राख्नु पर्ने रूपमा सोच्नै सकेनौँ ।
देशमा महँगी, लूट, फरेब, कालाबजारी, हत्या, आतंक र हिंसाको राज चलेको छ । सर्वसाधारण नागरिक नेपाल भित्रै शरणार्थी बन्नुपरेको जगजाहेर हुँदा, कुनै राजनीतिक दल वा शक्तिको माग र बिरोध कार्यको मुद्दा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र जीउन चाहिने आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू को उपलव्धता हुन सकेको छैन । सबैलाई सत्ता चाहिएको छ, सत्तामा पुग्दा आफ्नाहरूलाई मिल्ने मुलुकको अवसर र ढुकुटीको रजाइँ मात्र राजनीतिक सफलताको उद्देश्य हुने गरेको छ ।
अझै पनि, हाम्रो दशा र दिशा प्रष्टिएको छैन । हाम्रो लक्ष्य, गन्तव्य र मुलुकले लिन पर्ने बाटोका बारेमा कुनै राजनीतिक शक्तिहरूबीचमा मिल्नसक्ने आधारहरू देखापरेका छैनन् । यस्तोमा दलका समर्थक, जातीय समूह र क्षेत्रवादको आगो भर्खरै झोसेर मुलुक सल्काइएको छ र यसको दूरगामी प्रभाव भोलिका दिनमा कुन रूपमा हामीले अपनाउनपर्ने होला केवल अनुमान गर्न सकिन्छ । मध्य अफ्रिकाका मुलुकहरू कलह, हिंसा, भोक, अनिकाल, र खडेरीका पीडाबाट माथि उठ्न उपायको छटपटीमा छन् र युरोप र अमेरिकाको सहयोगी ध्यान पनि अब अफ्रिकालाई माथि उठाउन एकोहोरिएको छ, बिगत केही वर्षयता । तर हाम्रो मुलक नेपाल भने, आर्थिक विकासको चमत्कारिक दौडमा विश्वलाई नै अचम्म पार्दै अगाडि बढिरहेका दुई छिमेकीहरूको बीचमा बसेर पनि, ओरालोतिरको सजिलो दौडको बाटो झर्दै गरेको देखिन्छ ! कहिले होला यो दिशातर्फको यात्रा छोडेर हामी उँभो लाग्ने ?
दौँतरीमा नयाँ-पुराना ब्लगरलाई उपस्थित गराउँदै आएका छौँ । ब्लगर भेलाको समयमा भने यो क्रम छुटेको थियो। ब्लगभित्र ब्लगको उद्देश्य नै ब्लगरहरुलाई थप परिचित गराउनु हो। ब्लगर भेलाले त्यो कार्य पूरा गरेकोले अब यसलाई क्रम छुटेको नभन्दा कसो होला ? यस पटक विगत तीन वर्षदेखि prelude to perfection ब्लग लेखिरहनुभएकी ब्लगर अन्जली तिमल्सिनालाई ब्लगभित्र ब्लगमा निम्त्याएको छु। अब लागौं अन्जलीजीको ब्लग-गफतिर।
१) ब्लग दुनियाँमा कसरी आउनुभयो ?
=> ब्लग दुनियाँमा आउनुअघि ब्लग के हो भन्ने कुरा थाहा थिएन । मलाई त ब्लग भन्ने यस्तो अनलाइन मिडिया छ भन्ने पनि थाहा थिएन । जब मैले पत्रिकामा छापिएका ब्लगसम्बन्धी लेख पढेँ, तुरुन्तै ब्लगमा हाम्फालेँ ।
बेलाबखतमा लेख्ने बानी भएकोले, ब्लगलाई नै उपयुक्त माध्यमको रुपमा रोजेँ, अनि ब्लगमा लेख्न थालेँ । समाजमा घटेका घटना, परिघटना अनि आफ्नो दृष्टिकोण आदि कुराहरु लेख्नको लागि ब्लग नै उपयुक्त माध्यम लाग्यो ।
२) उत्तमताको परिचय(prelude to perfection) दिन कति हदसम्म सफल हुनुभयो ?
‍=> पर्फेक्सन भन्ने कुरा या भनौँ १०० प्रतिशत नै भन्ने कुरा त यो संसारमा केही नै छैन । “A prelude to Perfection” पर्फेक्ट भन्न नभई, पर्फेक्सन या भनौँ उत्तमतातिर बढेको पाइला मात्र हो । कति सफल भन्दा पनि कति आफू अगाडि बढ्न सकियो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो । समग्रमा भन्दा, पर्फेक्सनतिर चालिएको पाइला नै ‘A prelude to Perfection’ हो ।
३) तपाईँको ब्लग स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा के मा केन्द्रित छ ?
‍=> यो सम्पूर्णरुपमा आफ्ना विचारहरुले भरिएको छ । घटना, परिघटना, सामाजिक व्यवस्था का बारेमा आफ्नो विचारहरु पोख्ने थलो को रुपमा ब्लग अगाडि बढेको छ । मलाई लाग्छ, म हजारौँ सर्वसाधारण को बोली बोलिरहेको छु । मेरो ब्लगमा पोलिटिक्स का कुरा लेख्दिनँ भन्ने कुनै निर्णय त गरेको छैन, तर पनि बेलाबखत समसामयिक राजनीतिको बारेमा पनि लेख्ने गरेकी छु ।
खासमा ब्लग सुरु गर्दा त म असमानता अनि अव्यवस्थाका विरुद्ध आफ्ना भावनाहरु, निराशाहरु, लेख्ने गर्थेँ । तर अहिले यसो नै लेख्छु भन्ने छैन । ब्लगसँगै धेरै कुरा जान्दै बुझिँदै आइयो, अत: हिजोआज जे लेख्न विचार आउँछु त्यही नै लेख्छु । ब्लगमा कथा, कवितादेखि आफ्ना विचारहरु, राजनीति र समाजका अव्यस्थाका बारेमा टीका-टिप्पणीहरु सबै कुरा समेटिएका छन् जस्तो लाग्छ ।
४) ब्लगको पाठक अन्तरक्रियासँग कत्तिको सामीप्यता राख्नुहुन्छ ?
‍=> अन्तरक्रियाबिना ब्लग अलि खल्लो नै हुन्छ । पाठकबाट आउने प्रतिक्रियाले मलाई लेख्न नै हौस्याउँछ, अनि आफूले लेख्दा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु पनि थाहा हुने गरेको छ । हुन त, केही विषयमा म एकपक्षीय पनि हुनसक्छु, तर त्यस्तोमा आउने फरक धारणाले मलाई धेरै कुराहरु बुझ्न मद्दत गर्ने गरेको छ । ‘ब्लग’ पाठक प्रतिक्रियाबिना चल्न गाह्रो नै छ ।
५) ब्लग ३ वर्षअघिदेखि सुरु गर्नुभएको रहेछ तर ब्लग सामग्री त वर्षैपिच्छे घट्दै छन् नि ?
=> पेसाले विद्यार्थी परेँ, अत: लेख्नको लागि पनि समय निकाल्नुपर्छ । त्यसैले सामग्री कम लागेको हुनसक्छ । तर म नियमितजसो नै लेख्नेगर्छु, कहिले ढिलो कहिले चाँडो त भइहाल्छ ।
६) सभ्यताको परिचय के होला ?
‍=> सभ्यताको परिचय केही शब्दमा भन्न सकिने कुरा होइन । हामीले जसलाई सभ्य भन्छौँ, ऊ सभ्य नहुन सक्छ । सभ्यता भन्ने कुरा हाम्रो रहनसहन र रीतिथितिसँग जोडिएको कुरा हो, यो कुरा स्थानविशेष र जातिविशेषअनुरुप फरक-फरक हुनसक्छ । साँच्चै भन्दा, सबै कुरा छोडेर, ‘मानवता’ नै सभ्यताको परिचय हो ।
७) सफलताको परिचय नि ? सफलता र असफलताको वक्ररेखा कसरी निर्धारण गर्ने ?
=> सफलता र असफलता भन्ने कुरा जीवनका दुई पाटा हुन् । सफलताले अझै अगाडि बढ्न हौसला दिन्छ भने असफलताले अगाडि बढ्न अझै मिहिनेत गर्न हौस्याउँछ । खासमा, असफलता नै सफलताको सिँढी हो । सफल भइनँ भनेर चिन्ता गर्नु र निराश हुनुभन्दा, त्यस असफलतालाई शिक्षाको रुपमा लिएर अघि बढ्दा, सफलता पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । समग्रमा भन्दा, सफलता र असफलता दुवैलाई आत्मसात् गर्दै हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
८) नारी र पुरुषबीच के भिन्नता होला ? सीमित महिला ब्लगरबीच आफूलाई पाउँदा कस्तो महसुस हुन्छ ?
=> नारी र पुरुष दुवै संसारका सुन्दर श्रृजनाहरु हुन् । संसार चलाउनका लागि नारी र पुरुषमा मानवजातिलाई वर्गीकरण गरिएको छ । नारी-पुरुष दुवै एक-अर्काका पूरक हुन् ।
सबैको आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार छन्, अनि दुवैको आफ्नै महत्व छ । यो ठूलो र त्यो सानोभन्दा पनि नारी र पुरुष एक-अर्काका पूरक हुन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । तर पनि नारीहरु केही हदसम्म अवसरबाट बन्चित छन् अनि पुरुषको दाँजोमा महिलालाई हेप्ने नै गरिएको छ । महिलाले पनि गर्न सक्छन् र उनीहरुमा पनि केही गर्न सक्ने खुबी छ भनेर मान्न नसकिएसम्म र अवसरबाट बन्चित गरिएसम्म, यो असमानता कायम नै रहनेछ ।
ब्लगिङको जमातमा केही सीमित महिला ब्लगरहरुबीच उभिन पाउँदा खुसी नै लागेको छ तर पनि आशा छ यो जमात छिट्टै ठूलो हुनेछ ।
९) योगालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
=> यो आधुनिक र औषधिमय बनेको जमानामा योगा एउटा अचुक उपाय हो स्वस्थ रहनका लागि । हिजो आज प्राय: सबैको बिहानी नित्यकर्म योगा नै बन्दै गएकोले पनि योगा के हो भन्ने कुरा त सबैलाई प्रस्ट हुँदै आएको छ, हैन र ?
१०) निद्रामा घुरेको भिडियो राख्नुभएको रहेछ; निद्रामा घुर्ने समस्यासँग कत्तिको परिचित हुनुहुन्छ, केही रमाइला-नरमाइला घटना छन् कि ?
=> त्यो भिडियो साँच्चै रमाइलो थियो । घुर्ने समस्यासँग म त्यति परिचित छैन, अनि अहिलेसम्म त्यस्तो घटनाहरु सामना गर्नुपरेको पनि छैन ।
११) ब्रेन ड्रेनले नेपाललाई कत्तिको पिरोलेको छ जस्तो लाग्छ ?
=> ब्रेन ड्रेनले साँच्चै पिरोलेको हामीलाई । धेरैजसो युवाहरु विदेशिनुको कारण पनि यही नै हो । देशको अवस्था, अस्थिर राजनीति अनि भ्रष्ट नेतृत्वको कारण युवाहरुमा निराशा बढ्दै गएर, ब्रेन ड्रेन को समस्याले नेपाललाई गाँजेको छ ।
१२) अन्य ब्लग कत्तिको सयर गर्नुहुन्छ ? राम्रा-नराम्रा पक्ष केलाइदिनुहुन्छ कि ?
‍=> प्राय: फुर्सदमा म ब्लगहरु पढ्ने गर्छु । यही नै पढ्छु र यसकै ब्लग पढ्छु भन्ने त छैन, तर पनि फुर्सदमा विभिन्न व्यक्तिहरुको ब्लग पढिरहेको हुन्छु, केही नयाँ कुरा थाहा पाइरहेको हुन्छु ।
अनि ब्लगमा कमेन्ट गर्नका लागि मात्र कमेन्ट गर्ने प्रथा चाहिँ मलाई मन पर्दैन । प्रतिक्रिया दिँदा, लेखिएको कुरालाई एकपटक आफ्नो आँखाले विश्लेशण गर्न सबैलाई आग्रह गर्छु । यहाँ त प्राय: ब्लगरले जे लेख्यो, त्यसमै हो मा हो मिलाएर एक लाइनको सस्तो प्रतिक्रिया दिने गर्छन् । यो कुरा चाहिँ मलाई ब्लगमा कहिलेकाहीँ बिझ्ने नराम्रा पक्षहरु हुन् ।
१३) फुर्सदमा के गर्नुहुन्छ, व्यस्ततामा के गर्नुहुन्छ ?
=> भनिहालेँ नि, फुर्सदमा ब्लग पढ्ने गर्छु । वेबसाइट सर्फ गर्‍यो, ब्लग पढ्यो । तर धेरैजसो समय चाहिँ क्लासको एसाइन्मेन्ट गर्दैमा बित्छ ।
१४) तपाइले दौँतरीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
=> दौँतरीको काम प्रशंसनीय छ । विभिन्न व्यक्ति अनि उनीहरुका पृथक् धारणाहरु एकै ठाउँमा समावेश गरिएकोले पनि, एउटै विषयमा धेरै कोणबाट गरिएका विश्लेषणहरु पढ्न पाइन्छ, त्यसैले पनि मौका मिल्दा दौँतरी पढ्ने गर्छु ।
१५) तपाईंलाई भन्न मन लागेको तथा मैले सोध्न छुटाएको त्यस्तो केही कुरा छन् कि ?
=> सबै कुरा नै भनिसकेकी छु जस्तो लाग्छ । त्यही पनि अन्तिममा भन्छु, दौँतरीले सबै नेपाली ब्लगरहरुलाई समेट्न चालेको कदम प्रशंसनीय छ । दौँतरीलाई बधाई एवम् शुभकामना !
Posted by: nepalean Labels: ब्लगभित्र ब्लग